]Onye na-eweta Sistemụ Nkwenye Efere Ikike, Sistemu Ịdọba ụgbọala ANPR kacha mma
Ịdọba ụgbọala mara mma
Ọnụ ụzọ ntụgharị
Sistemụ nyocha ụgbọ ala
Ntuziaka ebe a na-adọba ụgbọala
Ụlọ > Ngwaahịa > Ịdọba ụgbọala mara mma
Otu a bụ maka ngosipụta nkọwa ngwaike ngwaahịa vidiyo nke sistemu ebe a na-adọba ụgbọala nwere ọgụgụ isi. Sistemụ ebe a na-adọba ụgbọala smart na-agụnyekarị sistemu ngwaike smart yana sistemụ sọftụwia arụ ọrụ iji hụ na arụ ọrụ nke ngwaahịa niile. Na mgbakwunye, a na-agbakwunye nhazi nkwụnye ụgwọ ịkwụ ụgwọ, nke na-abawanye ọgụgụ isi AI nke sistemụ niile. Nke a na-agụnye usoro amata efere ikike ọgụgụ isi, ebe a na-adọba ụgbọala alpr, smart tiketi nwere sistemu lpr, sistemu ụgbọ ala smart alpr, wdg.
TGW ALPR Igwefoto nnabata ikike ịnya ụgbọ ala nwere igwefoto ip njikwa ohere ngwanrọ
]Teknụzụ nzere ikike nke Plate (License Plate Recognition, LPR) dabere na teknụzụ kọmpụta, teknụzụ nhazi onyonyo, yana nnabata na-enweghị isi iji wuo njirimara nke ụdị ụgbọ ala, chọpụta njirimara ụgbọ ala, dị ka Plate, ụdị, agba, wdg. Ọ nwere ike wepụ ihe oyiyi efere na-akpaghị aka site na ihe oyiyi, ọ na-eji nkà na ụzụ nhazi ihe oyiyi dị elu, njirimara ụkpụrụ na ọgụgụ isi nke ihe oyiyi na-achịkọta ozi na nhazi, ọ nwere ike ịchọpụta akara ngosi nọmba, mkpụrụedemede na mkpụrụedemede China, ma nye ya ozugbo. nsonaazụ njirimara, na-eme ka usoro ahụ bụrụ eziokwu.agwa sistemụ njirimara efere ikike1. Nwere ike ịmata ederede akwụkwọ ikike ụgbọ ala na ọnụọgụgụ2. Nwere ike ịmata otu ahịrị na abụọ akara akara akara nọmba3. Nwere ike ịmata mkpụrụedemede 0-2 na nọmba 1 ruo 4 maka akara akara4. Nwere ike ịmata Chinese na Bekee nke akara akara5. Ebe nchekwa data nwere ike ịchekwa onyonyo nwude, akara akara akara, nọmba okporo ụzọ na oge ụgbọ ala site na ndekọ.6. Ọnụ ụzọ nọmba akara ikike na ndekọ ọpụpụ nwere ike ịkọpụta mmepụta7. Kwado Bekee, Korean, Simplified Chinese na Chinese omenala na asụsụ ndị ọzọ nwere ike ịhazi ya.8.Nha onyonyo: 768*576pixels9.Nha ihu: 16*16-48*64 pikselụ10.camera egbe larịị akụkụ: kacha n'akuku 25 ogo n'ime mbanye uzo11.camera egbe vetikal akụkụ: kacha n'akuku 25 ogo n'ime kehoraizin12. Obere nchapụta: 500lux
Sistemụ ebe a na-adọba ụgbọala ụgbọ ala IP LPR igwefoto ikike
]Kedu ihe bụ teknụzụ LPR(Ikikere Plate Nghọta)?LPR ma ọ bụ ANPR (Nkwenye Nọmba Akpaghị aka)bụ teknụzụ na-eji njirimara ngwa anya na onyonyo iji gụpụta epekele ndebanye ụgbọ ala iji mepụta data ọnọdụ ụgbọ ala. Ọ nwere ike iji igwe onyonyo emechiri emechi, igwefoto mmanye iwu okporo ụzọ, ma ọ bụ igwefoto emebere maka ọrụ ahụ. Ndị uwe ojii gburugburu ụwa na-eji LPR maka ebumnuche mmanye iwu, gụnyere ịlele ma ụgbọ ala edebanyere aha ma ọ bụ nyere ikike ikike. A na-ejikwa ya maka ịnakọta ụgwọ eletrọnịkị n'okporo ụzọ a na-akwụ onye ọ bụla na ​​dịka usoro eji edepụta mmegharị nke okporo ụzọ, dịka ọmụmaatụ site n'aka ụlọ ọrụ okporo ụzọ.Enwere ike iji akara mpempe akwụkwọ chekwaa foto ndị igwefoto weghaara yana ederede sitere na efere ikike, nke nwere ike ịhazi ya iji chekwaa foto onye ọkwọ ụgbọ ala. Sistemu na-ejikarị ọkụ infrared iji kwe ka igwefoto see foto n'oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ abalị. Nkà na ụzụ LPR ga-eburu n'uche mgbanwe dị iche iche nke efere site n'otu ebe ruo ebe.Uru nke teknụzụ LPR:1. Maka njikwa ebe a na-adọba ụgbọala;2. Chọpụta ederede efere ụgbọ ala na ọnụ ọgụgụ na-akpaghị aka;3. Chekwaa ụgwọ ọrụ na ihe isi ike njikwa na njikwa ebe a na-adọba ụgbọala;4. Melite arụmọrụ okporo ụzọ;5. Nlekọta ebe a na-adọba ụgbọala na-enweghị ntụpọ / enweghị kaadị;
Sistemụ njirimara mpempe akwụkwọ
]Shenzhen TGW Technology Co., Ltd bụ ndị na-eduga ohere njikwa ngwọta na-eweta maka ụgbọ nwere ọgụgụ isi na-adọba ụgbọala usoro, akwụkwọ ikike akara ngosi usoro na-agafe agafe ohere akara turnstile na ihu ude.
Sistemụ ebe a na-adọba ụgbọala mara mma LPR dị elu nwere sọftụwia anpr
]Teknụzụ nzere ikike nke Plate (License Plate Recognition, LPR) dabere na teknụzụ kọmpụta, teknụzụ nhazi onyonyo, yana nnabata na-enweghị isi iji wuo njirimara nke ụdị ụgbọ ala, chọpụta njirimara ụgbọ ala, dị ka Plate, ụdị, agba, wdg. Ọ nwere ike wepụ ihe oyiyi efere na-akpaghị aka site na ihe oyiyi, ọ na-eji nkà na ụzụ nhazi ihe oyiyi dị elu, njirimara ụkpụrụ na ọgụgụ isi nke ihe oyiyi na-achịkọta ozi na nhazi, ọ nwere ike ịchọpụta akara ngosi nọmba, mkpụrụedemede na mkpụrụedemede China, ma nye ya ozugbo. nsonaazụ njirimara, na-eme ka usoro ahụ bụrụ eziokwu.
Ọnụ ụzọ ebe a na-adọba ụgbọala na tiketi siri ike na nke dị nro
]Ọnụ ụzọ ebe a na-adọba ụgbọala na tiketi siri ike na nke dị nroIsi ọdụ ụgbọ ala gụnyere.1. Kaadị dispenser-adọba ụgbọala usoro njikwa + kaadị agụ.2. Sistemụ njikwa ebe a na-adọba ụgbọala nke tiketi + onye na-agụ kaadị.3. RFID ogologo anya ịgụ-adọba ụgbọala njikwa usoro + RFID Etag.4. ANPR(Automatic Number Plate Recognition) na-adọba ụgbọala management system.Sistemụ ndọba ụgbọalaIsi iheOkwu(Onye na-ekesa kaadị+ Onye na-agụ kaadị)Sistemụ ndọba ụgbọalaIgwe ihe na-ekesa kaadị& Onye na-agụ akwụkwọNdị ọbịa nwa oge:1.Visitors na-agbanye bọtịnụ iji nweta kaadị site na igwe ntinye kaadị ntinye mgbe ahụ ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe na-akpaghị aka.2.Mgbe ụgbọ ala na-agafe, ọnụ ụzọ mgbochi ga-emechi na-akpaghị aka.3. Mgbe ndị ọbịa na-apụ, ha kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ nchịkwa. Ma ọ bụ kwụọ ụgwọ na igwe ịkwụ ụgwọ ebe a na-adọba ụgbọala (gụọ kaadị wee gbakọọ ụgwọ ebe a na-adọba ụgbọala).4. Mgbe akwụchara ụgwọ, ndị ọrụ etiti na-emeghe ọnụ ụzọ mgbochi maka ndị ọbịa ịpụ. (Ọ bụrụ na akwụ ụgwọ na igwe nkwụnye ụgwọ, ndị ọbịa na-etinyeghachi kaadị ahụ na igwe ọpụpụ na onye nnata kaadị, mgbe ahụ ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe ozugbo.)5.Barrier ọnụ ụzọ nso mgbe ụgbọ ala gafere na-akpaghị aka.Ndị ọrụ ogologo oge:ha buru ụzọ kwụọ ụgwọ wee nweta kaadị edebanyere aha. Ha na-ehichapụ kaadị ndị ahụ na ntinye& igwe ọpụpụ na ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe na akpaghị aka.Ọnụ ụzọ mgbochiEbe njikwa ebe a na-adọba ụgbọala gụnyere sọftụwia, PC, onye na-enye kaadị wdg.Igwe akwụ ụgwọ ebe adọba ụgbọala (Nhọrọ)(Ihe na-ekesa tiketi +Onye na-agụ kaadị) Sistemụ ndọba ụgbọalaIgwe na-ekesa tiketiNdị ọbịa nwa oge.1.Visitors na-agbanye bọtịnụ iji nweta tiketi site na igwe ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ mgbe ahụ ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe na-akpaghị aka.2.Mgbe ụgbọ ala na-agafe, ọnụ ụzọ mgbochi ga-emechi na-akpaghị aka.3. Mgbe ndị ọbịa na-apụ, ha kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ nchịkwa. Ma ọ bụ kwụọ ụgwọ na igwe ịkwụ ụgwọ ebe a na-adọba ụgbọala.(Chọọkwa tiketi wee gbakọọ ụgwọ ebe a na-adọba ụgbọala).4. Mgbe akwụchara ụgwọ, ndị ọrụ etiti na-emeghe ọnụ ụzọ mgbochi maka ndị ọbịa ịpụ. (Ọ bụrụ na akwụ ụgwọ na igwe ịkwụ ụgwọ, ndị ọbịa na-eji nyocha tiketi na-enyocha tiketi na igwe ọpụpụ, mgbe ahụ ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe ozugbo.)5.Barrier ọnụ ụzọ nso mgbe ụgbọ ala gafere na-akpaghị aka.Ndị ọrụ ogologo oge: ha buru ụzọ kwụọ ụgwọ wee nweta kaadị edebanyere aha. Ha na-ehichapụ kaadị ndị ahụ na ntinye& igwe ọpụpụ na ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe na akpaghị aka.Ọnụ ụzọ mgbochiEbe njikwa ebe a na-adọba ụgbọala gụnyere sọftụwia, PC, nyocha tiketi, onye na-agụ kaadị wdg.Igwe akwụ ụgwọ ebe adọba ụgbọala (Nhọrọ)Sistemụ ịnya ụgbọ ala RFIDOnye na-agụ RFIDMaka ndị ọrụ ogologo oge naanị.1.The ọrụ kwụrụ ụgwọ kwa ọnwa na-adọba ụgbọala ego na-enweta RFID kaadị si management center.2.Users arapara RFID kaadị na windshield.3.Mgbe ndị ọrụ na-anya ụgbọ ala ha nso na ọnụ ụzọ ntinye, onye na-agụ kaadị na ọnụ ụzọ ntinye ga-agụ kaadị RFID na windshied n'ebe dị anya.4.Once ịgụ, ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe na-akpaghị aka.5.Mgbe ụgbọ ala gafere, ọnụ ụzọ mgbochi ga-emechiKaadị RFIDỌnụ ụzọ mgbochiEbe njikwa ebe a na-adọba ụgbọala gụnyere sọftụwia, PC, onye na-enye kaadị wdg.Nchọpụta akara ọnụọgụgụ akpaaka (ANPR)Igwefoto ANPRMaka ndị ọbịa nwa oge:1.Mgbe ndị ọbịa na-anya ụgbọ ala ha nso n'ọnụ ụzọ ntinye, igwefoto ANPR na ọnụ ụzọ ntinye ga-ese foto nke akwụkwọ ikike ma bulite ozi na ebe nlekọta.2.Once nọmba efere ghọtara, ọnụ ụzọ mgbochi ga-emeghe na-akpaghị aka. Na mgbe ụgbọ ala ndị ahụ gafere, ihe mgbochi ahụ ga-emechi ozugbo.3. Mgbe ndị ọbịa na-apụ, ha kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ nchịkwa. Ma ọ bụ kwụọ ụgwọ na igwe ịkwụ ụgwọ ebe a na-adọba ụgbọala.(Tinye nọmba ikike ikike wee gbakọọ ụgwọ ụgbọ ala).4.Mgbe ọpụpụ, igwefoto ANPR ga-amata nọmba efere ọzọ. Ọ bụrụ na akwụ ụgwọ, ihe mgbochi ga-emeghe. Ọ bụrụ na akwụghị ụgwọ, ihe mgbochi agaghị emeghe ma PC ga-enye ọkwa.5.Mgbe ụgbọ ala gafere, ọnụ ụzọ mgbochi ga-emechi.Ndị ọrụ ogologo oge: A ga-edenye akara akara ikike ha na etiti. Ọnụ ụzọ mgbochi ahụ ga-emeghe ozugbo achọpụtara akara akara ikike ha.
Ngwa Smart-adọba ụgbọala Sistemụ njikwa nnweta tiketi ịnya ụgbọ ala
]Ngwa Smart-adọba ụgbọala Sistemụ njikwa nnweta tiketi ịnya ụgbọ ala.Igwe na-ebi akwụkwọ tiketi ụgbọ ala nwere ọgụgụ isi ire ere maka sistemu ebe adọba ụgbọalaSistemu Kaadị IC/ID dị ka sistemụ tiketi, gbanwee tiketi ka ọ bụrụ kaadị IC/ID nke kwesịrị ịnakọta mgbe akwụchara ụgwọ.Usoro njikwa ebe a na-adọba ụgbọala bụ usoro ọgbara ọhụrụ na nke nwere ọgụgụ isi maka njikwa ebe a na-adọba ụgbọala. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe na ebe obibi, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa ịzụ ahịa, ụlọ ọgwụ na ebe ọha na eze ndị ọzọ maka njikwa okporo ụzọ, njikwa na mmepụta ego.Ọ nwere ike imeziwanye arụmọrụ nke njikwa ebe a na-adọba ụgbọala, na-ewusi nchebe ụgbọ ala, belata ikike na ego, ma zere aghụghọ, nakwa. inweta uru na ego enwetara maka onye njikwa ụgbọ ala.TGW na-enye akụrụngwa na-adọba ụgbọala na-eduga na ihe ngwọta iji dozie nsogbu ebe ị na-adọba ụgbọala, nke gụnyere kaadị RFID / bar koodu nkesa ihe na-adọba ụgbọala, sistemụ ebe a na-adọba ụgbọala RFID ogologo, usoro ANPR na-adọba ụgbọala, igwe na-adọba ụgbọala.
Kiosk ịkwụ ụgwọ ụgbọ ala Smart High Quality High Quality with Bar code Reader
]Igwe nkwụnye ego akpaaka.Atụmatụ:NchekwaA na-akpọchi ọnụ ụzọ isi na mkpuchi nchekwa eletrọnịkị na usoro crossbar nke mkpọchi. Na kaadị onye nchịkwa na okwuntughe kwesịrị imeghe mkpọchi nchekwa eletrọnịkị.Igbe nchekwa ego nwere modul nchekwa dị iche iche. Ọkpụrụkpụ nke igbe ahụ bụ 4-5mm, a na-ekpochikwa igbe nchekwa ego site na mkpọchi ọnụ ụzọ ha.Mkpụrụ ego ịkwụ ụgwọ dị, ụgwọ, kaadị akụ/kredit, Ntinye ngwa ngwa Babknotes dị $5, $10, $20, $50, $100Mpụta akwụkwọ ndekọ ego dị$1, $5, $20Ntinye mkpụrụ ego dị$1, $5, $10Mpụta Coin dị$0.5, $1Chọta m ọrụ maka ịchọta ụgbọ ala gịỌrụ a pụrụ iche maka ebe a na-adọba ụgbọala nke nwere usoro ntụzịaka vidiyo na-adọba ụgbọala na usoro nnabata efere ikike. Tinye nọmba ikike ụgbọ ala gị, ihuenyo ngosi 22 "HD LCD Touch ga-egosi kpọmkwem ọnọdụ ụgbọ ala gị na ebe a na-adọba ụgbọala na map eletrọnịkị, ma gosikwa ụzọ kacha mma isi nweta ụgbọ ala gị.Mkpu mmebiIgwe ahụ nwere igwefoto maka nleba anya ma nwee ihe mmetụta infrared. Ọ nwere ike idekọ ndị na-arụ ọrụ ya. Ma mgbe mmadụ gbajiri ya, ọ ga-ada ụda dị nkọ ozugbo, ọ ga-enyekwa akara ngosi na ụlọ ọrụ nchịkwa.Kwesịrị ekwesị maka ebe a na-adọba ụgbọala na mpaghara obibi, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ azụmahịa, ụlọ ọrụ gọọmentị, ụlọ ọrụ logistics, ụlọ ọgwụ, obodo nta, ahịa ịzụ ahịa, na ihe ndị ọzọ.Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd Professional High Quality Smart Car Parking Payment Kiosk With Bar code Reader maka ndị na-emepụta ụgwọ ịkwụ ụgwọ akpaka, ndị ọkachamara na nke ọma na-agafe agafe nweta otu teknụzụ, na-akwado azịza ahaziri ahazi na-abụghị ọkọlọtọ.
Njikwa ọkụ na-ere ụgbọ ala Anpr / Lpr / Alpr Igwefoto ebe a na-adọba ụgbọala TGW-LAV4
Igwefoto Lpr/Anpr/Alpr kacha mma Onye nrụpụta sistemu ebe a na-adọba ụgbọala kwụ ọtọ TGW-LBV2
]Nkà na ụzụ nnabata Plate ikike (Ikikere Plate Recognition, LPR) dabere na teknụzụ kọmputa, nhazi onyonyo.teknụzụ, na Nghọta na-enweghị isi iji wuo njirimara nke ụdị ụgbọ ala, chọpụta njirimara ụgbọ ala,dị ka Plate, ụdị, agba, wdg. Ọ nwere ike wepụ ihe oyiyi efere na-akpaghị aka na ihe oyiyi, ọ na-eji ihe oyiyi dị eluteknụzụ nhazi, njirimara ụkpụrụ na ọgụgụ isi nke ihe oyiyi anakọtara na nhazi, ọ nwere ikemara akara ngosi akara ọnụọgụ, mkpụrụedemede na mkpụrụedemede China, ma nyere nsonaazụ nnabata ozugbo, na-eme usoro ahụbụrụ eziokwu.
Akpaaka lpr ip igwefoto akwụkwọ ikike efere njirimara ntụzịaka ebe a na-adọba ụgbọala TGW-LFV2
]TGW-LFV2.Nhazi nke chọrọ ọtụtụ nkà. Ewezuga ihe ọmụma bụ isi dị ka Kinematics na Mechanisms, ha gụnyekwara Technical Drawing na Computer-Aided Engineering (CAE).Nkà na ụzụ nnabata Plate ikike (Ikikere Plate Recognition, LPR) dabere na teknụzụ kọmputa, nhazi onyonyo.teknụzụ, na Nghọta na-enweghị isi iji wuo njirimara nke ụdị ụgbọ ala, chọpụta njirimara ụgbọ ala,dị ka Plate, ụdị, agba, wdg. Ọ nwere ike wepụ ihe oyiyi efere na-akpaghị aka na ihe oyiyi, ọ na-eji ihe oyiyi dị eluteknụzụ nhazi, njirimara ụkpụrụ na ọgụgụ isi nke ihe oyiyi anakọtara na nhazi, ọ nwere ikemara akara ngosi akara ọnụọgụ, mkpụrụedemede na mkpụrụedemede China, ma nyere nsonaazụ nnabata ozugbo, na-eme usoro ahụbụrụ eziokwu.
LPR/ANPR HD sọftụwia akara ikike ụgbọ ala Camara nwere ebe a na-adọba ụgbọala na-akpaghị aka TGW-LGV2
]Ọkachamara LPR/ANPR HD sọftụwia akara ikike ụgbọ ala Camara nwere ndị na-emepụta TGW-LGV2 na-adọba ụgbọala na-akpaghị aka. na-aga n'usoro njikwa mma siri ike, gụnyere ịlele ntụpọ akwa na ntụpọ, hụ na agba ziri ezi, na ịlele ike nke ngwaahịa ikpeazụ.
Sistemụ njikwa ịnweta ebe a na-adọba ụgbọala na-akpaghị aka nwere njiri mara efere ikike site na igwefoto HD TGW-LHV4
]TGW-LHV4.Ngwaahịa ahụ karịrị ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya na arụmọrụ yana ịdị mma.Kedu ka sistemu ụgbọ ala LPR si arụ ọrụ1.Nbanye: Ụgbọ ala na-aga n'ihu ọnụ ụzọ, tupu ihe mgbochi. Igwefoto na-amata na-akpaghị aka ma dekọọ ọnụọgụ nke efere, ụbọchị na oge ntinye na ngwanrọ,. Ihe mgbochi ọnụ ụzọ na-ebili na-enye ohere ka onye ọkwọ ụgbọ ala banye n'ọdụ ụgbọ ala. Ihe mgbochi na-ada na-akpaghị aka ozugbo ụgbọ gafere.2. Na ọpụpụỤgbọ ala na-akwụsị na ụzọ ọpụpụ, obere oge tupu ihe mgbochi ahụ. Igwefoto na-akpaghị aka na-amata efere, mgbe ahụ, software ga-atomically akaụntụ na-adọba ụgbọala ego na-egosi na LED ngosi , ọkwọ ụgbọala ugwo-adọba ụgbọala ego, The ụzọ ọpụpụ mgbochi adahade, ikwe ka ọkwọ ụgbọala na-ahapụ ebe a na-adọba ụgbọala . Ihe mgbochi a na-agbada na-akpaghị aka ozugbo ụgbọ gafere .
Asụsụ map saịtị